Cidamada Ethiopia oo isku balaariyay Baladweyne howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka |
Cidamada Ethiopia oo isku balaariyay Baladweyne howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka
Baladweyne (Nogobnews) 17/01/2012 Ciidamada Ethiopia ee ku sugan Magaalada Baladweyne ee Xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu soo waramayaa inay isku balaariyeen Xaafadaha Magaaladaasi, iyadoo wali ay xiran yihiin Madaxweynaha Maamulka Dooxada Shabelle iyo Wakiilka Ahlu Sunna ee gobolada Hiiraan.
Goobjoogayaal ku sugan Magaalada Baladweyne ee Xarunta gobolka Hiiraan oo la hadlay Warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in maanta Ciidamo ka tirsan dowladda Ethiopia ay isku balaariyeen Xaafado ka tirsan Magaaladaasi.
Isbalaarinta maanta ay sameeyeen ciidamada Ethiopia ayaa ka dambeysay sida ay goobjoogayaasha sheegeen kadib markii labadii habeen ee ugu dambeysay fariisimo Ciidamada Ethiopia ay Magaalada ku leeyihiin lagu weeraray qaraxyo iyo dagaal galinkii dambe ee shalay ka dhacay Magaaladaasi oo u dhaxeeyay Ciidamada Maamulka Ahlu sunna iyo kuwa Dooxada Shabelle.
Ciidamada Ethiopia ayaa goobaha ay ay isku balaariyeen waxa ay ka sameeyeen howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka, iyagoo mid mid u baarayay gaadiidka gala Magaaladaasi iyo kuwa ka baxa, waxaan la cadeeyay in Ciidamada Ethiopia maanta lagu arkayay Xarunta booliska degmada iyo Xarumo kale oo ay horey ugu sugnaayeen Ciidamadaasi.
Wararkii ugu dambeeyay Magaalada Baladweyne ayaa waxa ay sheegayaan in Ciidamada Ethiopia ay ku suagn yihiin goobihii shalay ay ku dagaalameen Ciidamada Ahlu Sunna iyo kuwa Dooxada Shabelle inkastoo ay jirto xiisado dagaal oo u dhaxaysa dhinacyadaasi taasi oo ay walaac xoogan ka muujiyeen dadka ku sugan Magaaladaasi.
Dhinaca kale Wararka ka imaanaya Magaalada Baladweyne ayaa waxa ay sheegayaan in wali ay xabsi ku jiraan Madaxweynaha Maamulka Dooxada Shabelle C/fitaax Xasan Afrax iyo Wakiil Ahlu sunna ee gobolka Hiiraan Aadan Cabdulle Cawaale kuwaasi oo la waydiinayo waxa keenay in ciidamadoodu ay ku dagaalamaan Magaaladaasi.